September 2021 - Celegroup
ဒီလိုရှေ့ပြေးနိမိတ်တွေမြင်တွေ့ရင် သင့်ဆီကိုကံကောင်းခြင်းတွေ မကြာမှီရောက်ရှိလာတော့မယ်
September 30, 2021 Celegroup1975 0
လူတစ်ယောက် ကံကောင်းလာတော့ မယ်ဆိုတာကို ရှေ့ပြေးနိမိတ်တွေ ကြည့်ပြီး သိရှိနိုင်ပါတယ်… နိုင်ငံတိုင်း မှာတော့ ကံကောင်းခြင်းရဲ့ နိမိတ်ကင်္ကေတတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အယူအဆ အမျိုးမျိုး ရှိနေတက် ပါတယ်။ အယူအဆ အမျိုးမျိုးထဲကမှ လူအများစု နား လည် လက်ခံ ယုံကြည် ထားတဲ့ ကံကောင်းခြင်းရဲ့ နိမိတ်သင်္ကေတတွေ လည်း ရှိပါတယ်။ သင့်ဆီကို ကံကောင်းခြင်းတွေ မကြာခင် ရောက်ရှိ လာတော့မယ် ဆိုရင် ဒီလိုရှေ့ပြေးနိမိတ် သင်္ကေတတွေ […]
သင့် လက်ကိုင်ဖုန်း မထားသင့်သောနေရာ ၁၀ ခု
လက်ကိုင်ဖုန်းတွေဟာ ယနေ့ ခေတ်အခါမှာ လူတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ် ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ အိမ်သာ သွား ရင်တောင်မှ လက်ကိုင်ဖုန်းပါမှ လုံလောက် မယ်လို့ ပြောရမယ့် အခြေအနေပါ။ သင့်လက်ကိုင်ဖုန်းကို စနစ်တကျ အသုံးပြုရင် ကျန်းမာရေး ကို ထိခိုက်မှု မရှိနိုင်ပေမယ့် ဖုန်းအသုံးပြုပုံ၊ အသုံးပြု နည်း မမှန်ကန်ရင်(ဥပမာ တစ်ချိန်လုံး ဂိမ်းဆော့နေတာ၊ အချိန်ပြည့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ကြည့်နေတာ၊ ဖုန်းကို နားနဲ့ကပ်ပြီး အ ချိန်အကြာကြီး စကားပြောနေတာ) ကျန်းမာရေးကို […]
သားသမီးကို သူများထက် ကောင်းအောင် ထားနိုင်တယ်ဆိုပြီး ဂုဏ်တက်နေကြသူများ ၊ကိုယ့်ကလေးကို ထိရင် ဆရာ၊ ဆရာမပါ မကျန် ဆတ်ဆတ်ထိမခံဘူးဟေ့လို့ ကြွေးကြော်နေသူများ ၊ခြေမွှေးမီးမလောင် လက်မွှေးမီးမလောင်ထားနိုင်တာကို ဂုဏ်ယူပီတိ ဖြစ်နေကြသူများ သားသမီးကို ပိုးမွေးသလို မွေးမြူတယ်ဆိုပြီး ဟစ်ကြွေးနေကြသူများ ၊ကိုယ့်သားသမီးများကို ချစ်ရာမရောက်၊ နှစ်ရာရောက်နေသလားဆိုတာကို မိဘများ စမ်းစစ်နိုင်ဖို့အတွက် အောက်ပါလွန်ကဲမှုများကို ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်နှစ်ချက်ငြိနေပြီလဲဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးခွန်းထုတ်ကြည့်ရအောင် ၁။ အထူး အခွင့်အရေး ပေးလွန်းခြင်း အချို့ […]
ချစ်ပြတာနဲ့ တကယ်ချစ်တတ်တာ ခွဲခြားသိနိုင်ဖို့ ….
ချစ်ပြတာနဲ့ တကယ်ချစ်တတ်တာ ဘာကွာလဲ သိလား ။ မသိရင် ပြောပြမယ် ။ Fb ပေါ်မှာ tag လိုက် ၊ ပုံတင်လိုက် ၊ comments တွေမှာ ပလူပျံလိုက်နဲ့ တအားချစ်ပြတတ်တဲ့ ယောကျ်ားလေးတော်တော်များများက အဲ့ဒီကောင်မလေးကို တကယ်လက်ထပ်ယူတာ ရှားတယ်။ (မရှိဘူးမပြောဘူးနော်.. ရှားတယ်) ဆက်ဖက်လိုက်ပါအုံးဗျာ… ကိုယ်တိုင်လည်း cmt ရေးမှ ၊ အသဲပေးမှ ချစ်တယ်လို့ ထင်ခဲ့တာ ။ အဲ့လိုလုပ်ပေးတဲ့သူကို […]
အသုံးမတည့်ဘူးထင်ပြီး လွှင့်ပစ်ခဲ့တဲ့ ရေနွေးလ္ဘက်ခြောက်ဖက်များ အသုံးပြုနည်း…
ရေနွေးကြမ်းအိုးထဲက လက်ဖက်ခြောက်ဖတ်တွေမလွှင့်ပစ်ဘဲ သုံးတတ်ရင် အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလားဈေးက ဝယ်လာတဲ့ ငါးကတော်တော်ညှီတဲ့ ငါးဆိုရင် လက်ဖက်ခြောက်ဖတ်နဲ့အတူ ညှီနေတဲ့ငါးကို အိုးတစ်ခုတည်းထည့်ပြုပ်လိုက်ပါ။ ငါးညှီနဲ့ လုံးဝ ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။လက်ဖက်ခြောက်ဖတ်တွေကို ရေအေးနဲ့ရောပြီး မှန်ပြတင်း ပေါက်အိမ်သုံးပစည်းနဲ့ ရွှံ့ပေနေတဲ့ ဘွတ်ဖိနပ်တွေကို ဆေးကြောပွတ်တိုက်ပါ။ပြီးမှ အဝတ်သန့်နဲ့ ပြန်သုတ်လိုက်ပါ။ သန့်ပြီးတောက်ပြောင်သွားပါလိမ့်မယ်။ လဖက်ခြောက်ဖတ်တွေကို ရေအေးနဲ့ ရောစပ်ပြီး မြေသြဇာရည်အဖြစ် အပင်တွေကိုလောင်းပေးနိုင်ရင် သဘာဝ မြေသြဇာကို ရရှိစေပြီး အပင်တွေကို သန်စွမ်း ကျန်းမာစေပါတယ်။ လဖက်ခြောက်ဖတ်တွေကို […]
မြန်မာပြည်သူ ပြည်သား များအတွက် ထူးခြားတဲ့ နိမိတ်ကောင်းလာပါပြီ
သာသနာနေလို လလို ထွန်းမည့်ပုံ ယနေ့ ညောင်ရွှေမြို့နယ်ရှိ၊ကျောက်ဖြူကြီး ရုပ်ပွားတော် နှုတ်ခမ်းတော်မြတ်မှာ ပျားစွဲကပ်လာသည်တဲ့။ သာသနာထဲက ရဟန်းတစ်ပါးမို့သာသနာအကြီးအကျယ်ပြန့်ပွားမည့် နိမိတ်ကောင်းလို့ပဲ ကောက်ယူလိုက်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သာသနာ ရောင်ဝါနေသို့လင်းစေသော်။ ဗုဒ္ဓမိန့်မှာ မြတ်ဓမ္မာ ရှည်ကြာလေးမြင့်တည်စေသော်။ ဘုန်း သုတ ပုလဲ(28-9-2021) ဝေမျှပါသည်။ မေတ္တာဖြင့်… သာသနာနေလို လလို ထွန်းမည့်ပုံ ယနေ့ ညောင်ရွှေမြို့နယ်ရှိ၊ကျောက်ဖြူကြီး ရုပ်ပွားတော် နှုတ်ခမ်းတော်မြတ်မှာ ပျားစွဲကပ်လာသည်တဲ့။ သာသနာထဲက ရဟန်းတစ်ပါးမို့သာသနာအကြီးအကျယ်ပြန့်ပွားမည့် နိမိတ်ကောင်းလို့ပဲ ကောက်ယူလိုက်ပါတယ်။ […]
ဟိုတယ်အခန်းနံပါတ် ၃၉ (မိန်းခလေးများမဖတ်ရ)
ဟိုတယ် အခန်း နံပါတ် (၃၉) (မိန်းကလေးများ မဖတ်ရ) ဖုန်းတွေမပေါ်သေးတဲ့ခေတ်အပြာကားတွေကို ဖုန်းထဲမှာ ကြည့်လို့မရတဲ့ ခေတ်မှာပေါ့…. အရပ်မြင့်မြင့် အသားဖြူဖြူ လူရည်သန့် လူငယ်တျောက် ဟိုတယ်ထဲကိုဝင်လာတယ်။ ကောင်တာရှေ့ရောက် ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် သူဌေးကိုမေးတယ်။ man – အခန်းနံပါတ် ၃၉ အားလား…..boss – အားပါတယ်ဗျ….man – ကျွန်တော်ယူလို့ရမလား… boss – ရတာပေါ့ဗျ….man – ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါ… လူငယ်က အခန်းထဲမဝင်ခင် […]
အခုချိန်မှာဒီစာလေးကို ခင်ဗျားတို့ဖတ်မိရင် အချိန်မီကောင်းမီနိုင်ပါသေးရဲ့ တကယ်လို့ တစ်နေ့နေ့မှာ မင်းကို မွေးဖွားခဲ့တဲ့ လူနှစ်ယောက် လောကကြီးထဲက ထွက်ခွာသွားပြီဆိုရင်။ ဒီလောကမှာ မင်းနဲ့သွေးချင်းအရင်းနှီးဆုံး လူနှစ်ယောက် မရှိတော့ဘူးလို့ နားလည်ပါ။ ဒါကြောင့် မိဘတွေရှိတုန်းမှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပါ…မိဘတွေကို မင်းအတွက် စိတ်မပူပါစေနဲ့။ မိဘတွေ လိုချင်တာက သားသမီးတွေဆီက ပိုက်ဆံတွေထက် သားသမီးတွေရဲ့ အဖော်ပြုပေးမှုပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သားသမီးတွေဆိုတာ မိဘတွေရဲ့ နှလုံးသည်းပွတ်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ တကယ်လို့ တစ်နေ့နေ့မှာ မင်းကို မွေးဖွားခဲ့တဲ့ လူနှစ်ယောက် […]
လောကကြီးမှာ ပိုက်ဆံထက်ပိုပြီး အရေးကြီးတဲ့ အရာ (၇)ခုအကြောင်း
ဘဝမှာ ပိုက်ဆံထက်ပို အရေးကြီးတဲ့အရာ(၇)ခုအကြောင်း…. ဘဝမှာ ပိုက်ဆံဆိုတာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ပေမယ့်လို့ တကယ်တမ်း စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံထက်ပိုပြီး အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေ အများကြီး ရှိနေသေးပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ (၁) မိသားစု…. မိသားစု ကတော့ ဘဝရဲ့တန်ဖိုး မဖြစ်နိုင် တဲ့ အရာတစ်ခု ပါပဲ။ ပိုက်ဆံနဲ့ပေးဝယ် လို့ရတဲ့အရာထဲ မိသားစု လည်း မပါ ပါဘူး။ (၂) ကျန်းမာရေး…. ကျန်းမာခြင်းသည် လဘ်တစ်ပါး […]
ဘုန်းကြီးမေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ဒကာဒကာမတို့ “ကလေးထက်မိုက်နေတာတွေကို ရပ်လိုက်ကြပါတော့” မသိမိုက်ထက်သိမိုက်က ပိုပြီးဆိုးတယ်။ ကလေးမိုက်ထက် လူကြီးမိုက်က ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်။ မိုက်သင့်တဲ့အချိန်မိုက်တာထက် မမိုက်သင့်တဲ့အချိန်မိုက်မိလျှင် အချိန်မဲ့အမှောင်ဟာ ရှောင်သူမလွတ်တတ်ဘူးတဲ့။ ဒီလိုဘဝမျိုးအသိမျိုး အမူအကျင့်မျိုးတွေဟာ ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တုန်းအခါမှာ မရှိသင့်တော့ဘူး။ ကလေးတွေကမှခြောက်လိုက်ရင် ကြောက်တတ်သေးတယ်။ ဟိုနားမှာသရဲကြီးရှိတယ်ဆိုရင် မသွားတော့ဘူး။ ဒီနားမှာအရူးဖမ်းလိမ့်မယ်ဆိုလည်း မသွားတော့ဘူး။ စကားနားထောင်တယ် လူကြီးတွေကတော့ သံသရာဘေးဆိုးကြီးတွေ ကိုယ်တွေ့ကြုံနေရပါလျက် ကြောက်ရမှန်းမသိသေးဘူး။ အိုဘေး၊နာဘေး၊သေဘေး အပါယ်ဘေးဆိုးကြီးတွေရှိရာသွားနေတုန်းပဲ။ ဘုန်းကြီးတွေကလည်း ဒီဘေးဆိုးကြီးတွေကို ညွှန်ပြပြီးဟောပေးနေတာပဲ။ မသာတစ်ခေါက် ကျောင်းဆယ်ခေါက်ဆိုသလို […]
ဝါတွင်း၌ မင်္ဂလာမဆောင်ရခြင်းအကြောင်း ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားသော မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဝါတွင်းကာလများတွင် မင်္ဂလာဆောင်လေ့ မရှိကြပါ။ မင်္ဂလာဆောင်လေ့ မရှိကြသည့်အပြင် ခိုးရာလိုက်ခြင်း၊ နှစ်ဦးသဘောတူလက်မှတ်ထိုးထားခြင်းများပင် ပြုလုပ်ထားလေ့ မရှိကြပါ။ မြန်မာလူမျိုးတို့သည် ဝါတွင်းကာလတွင် လက်ထပ်ထိမ်းမြားယူကြပြီဆိုလျှင် ထိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားသူများကို ရစရာမရှိအောင် ပစ်ပစ်ခါခါ ပြောတတ်ကြသည်။ သို့ဖြစ်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဝါတွင်းကာလတွင် အဘယ့်ကြောင့် မင်္ဂလာမဆောင်ကောင်းပါသနည်း။ ဤအမေးမှာ လွန်စွာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော မေးခွန်းပင် ဖြစ်ပေသည်။ မိမိကိုယ်တိုင်သည်ပင် ဤမေးခွန်း၏အဖြေကို သိချင်နေခဲ့သည်မှာ ကြာပေပြီ။ စာအုပ်စာပေများ အမြဲလိုလို […]
ဘယ်သောအခါမှ မကြီးပွားနိုင်စေသည့် သား သမီးအမျိုးအစား(၁၁)မျိုး
September 29, 2021 cele group 0